सरकारविरुद्ध काँग्रेसको शक्ति प्रदर्शन, प्रतिपक्षको भूमिकामा कहाँ चुक्यो काँग्रेस ? « On Khabar
सरकारविरुद्ध काँग्रेसको शक्ति प्रदर्शन, प्रतिपक्षको भूमिकामा कहाँ चुक्यो काँग्रेस ?
लामो समय प्रतिपक्ष सुतेर बसेको आरोप आईरहेपछि नेपाली काँग्रेसले सोमबार देशभर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै काँग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो । जसअनुसार काँग्रेसले कोरोना महामारीका बीच संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशभर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ ।
विरोध सभामा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकारबाट जनता दिक्क भएको बताएका छन् । उनले सरकारका गलत कार्यशैलीका कारण काँग्रेस आन्दोलनमा होमिनुपरेको बताए । उनले लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ती काँग्रेसले देशभर प्रदर्शन गरेको पनि बताए । सोमबार मकवानपुरको हेटौंडामा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले कम्युनिस्ट सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रवैयाका कारण सडकमा ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने नारा लागेको समेत बताए ।
यस्तै कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले बालुवाटारको दुलोभित्र लुकेर षडयन्त्रमा रहेको सरकार ठेगानमा नआएसम्म सडकमै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने ’सरकार संसदबाट भाग्यो । बालुवाटारभित्र बसेर षडयन्त्र गरेको सरकारलाई ठेगानमा ल्याउन सडकमा आएका हौं । सरकार ठेगानमा नआएसम्म अब फर्केर यसै जाँदैनौं ।’
धनगढीमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्दै नेता थापाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै सडकमा आउन बाध्य भएको बताए । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन्, थापाले भने, अगाडीका दिनहरु कस्ता आउँछन् भन्न सक्ने अवस्था छैन् । तर पनि सडकमा आउन बाध्य भयौं’
थापाले थापाले सरकारलाई हावादारीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाए । ‘‘नेपाल सरकार संलग्न भएर भएको एउटा पनि भ्रष्टाचारको काण्ड प्रधानमन्त्रीको संरक्षण विना भएको छैन’ । कांग्रेस नेता थापाले भने, भ्रष्टाचारी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन । बालुवाटार गए पुग्छ, सिंहदरबार गए पुग्छ ।’
लामो समयदेखी चुपचाप बसेको काँग्रेस सडकमा आएको छ, आफ्नो सिमित शक्ति लिएर । यसले सरकारको पछिल्लो अलोकप्रियताको चर्चाको समयमा वाहवाही बटुल्ने प्रयासमात्रै हो अथवा राजनीतिक दबाबको आन्दोलन, यो भने यसै भन्न सकिन्न । पछिल्ला सरकारका भष्ट्रचारका काण्डहरु एकपछि अर्काे बाहिर आईरहँदा समेत प्रतिपक्ष मौन रहनुले भष्ट्रचारीको संरक्षणमा कांग्रेस आफै लागेको त होईन भन्नेबारे समेत टिकाटिप्पणीहरु हुने गरको छ ।
यसैविच नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले वर्तमान सरकार इतिहासकै नालायक सरकार भएको आरोप लगाएका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनले जरो गाडेको आरोप लगाउँदै काँग्रेस नेताहरुले सरकारका कारण अहिले गणतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्तिहरु सल्बलाईरहेको बताए ।
रुपन्देहीमा पनि सोमबार विरोध प्रदर्शन भयो, सरकार विरोधी प्रदर्शनमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरे । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले कम्युनिष्टको सरकार कमाउनिष्ट भएको आरोप लगाए ।
उनले जताततै भ्रष्टाचारले जरो गाडेको बताउँदै विमानदेखि महामारीबेला औषधि खरिद गर्दासमेत मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गरेका आरोप लगाए । मुलुकमा जताततै भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ त्यसको नाइके प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओली हुन पाण्डेले भने ।पाण्डेले अहिले लामो संर्घषबाट प्राप्त उपलब्धी नै खतरामा परेको भन्दै अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठने अवस्था सरकारकै कारण उठेको आरोप लगाए । काँग्रेस नेता एवं संघीय संसदका सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचारकै कारण जनतामा वितृष्णा पैदा भएको बताउदै त्यसैको परिणाम स्वरुप सडकमा राजावादीको आन्दोलन सुरु भएको दावी गरे ।
काँग्रेस नेता एवं संघीय संसद प्रमोदकुमार यादवले वर्तमान सरकारले जनहीतमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले जिल्लाबासी कृषिमन्त्री भएर पनि यहाँका किसानले समयमै मल नपाउनु दुःखद् भएको बताउदै समयमै मल नदिने कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई अब रुपन्देही प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्ने धारणा राखे विरोध सभामा बोल्दै काँग्रेस जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाक गद्दी, पूर्व सभापति रामचन्द्र ढकाल, पूर्व सांसजद इस्तियाक अहम्मद खाँन, जिल्ला सचिव रामकृष्ण खाँण, क्षेत्र नं। १ का क्षेत्रीय सभापति हिरा बहादुर खत्री, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने लगायतले कम्युनिष्ट सरकार सामन्ती, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, नैतिकहीन भएको आरोप लगाए ।
काँग्रेस नेताहरुले मुलुकभर भइरहेको राजावादीको प्रदर्शनको पनि चर्को आलोचना गर्दै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रमा ढावा बोल्ने जो कोहीलाई काँग्रेसले ठेगान लगाउने दावी गरे । विरोध सभा अघि भैरहवा र्याली निकालिएको थियो । (तस्वीर सौजन्य ः रातोपाटी)